Africa Forum Investment Forum dia niatrika hetsika 2 tany Afrika tamin'ity taona ity
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Africa Forum Investment Forum dia niatrika hetsika 2 tany Afrika tamin'ity taona ity
Ny fanangonam-bolan'ny hotely voalohany eto Afrika, ny Forum momba ny fampiasam-bola amin'ny hotely Africa (AHIF) antenaina hitranga any amin'ny tanàna afrikanina 2 amin'ity taona ity. Antenaina hisarihana ny famoriam-bola avo lenta an'ireo mpampiasa vola, mpamorona ary mpitarika orinasa ao amin'ny hotely sy ny indostrian'ny fandraisam-bahiny avy ao anatiny sy any ivelany ny hetsika. Africa.
Ny tatitra vao haingana nataon'ny mpikarakara dia nilaza fa ny fanontana AHIF andiany 2020 dia hatao ao Abidjan, Cote D'Ivore ny 23 ka hatramin'ny 25 martsa 2020, ao amin'ny Hotel Sofitel Abidjan Ivoire. Ny faharoa kosa dia hotanterahina ny 6 hatramin'ny 8 Oktobra 2020, any Nairobi, Kenya.
Ny Forum de l'Investissement Hôtelier Africaain (FIHA) dia hatao ao amin'ny Hotel Sofitel Abidjan Ivoire, miaraka amin'ny fanohanan'ny mpamatsy vola, Accor, hoy ny tatitra.
Mampiray ny Avaratra sy ny Andrefana
AHIF iray nahomby dia nokarakaraina ho an'ny fanjakana afrikanina miteny frantsay tamin'ny volana febroary 2019 tao Marrakech. Niara-niasa tamin'ny governemanta maraokana ny hetsika ary nahasarika solontena mihoatra ny 300 avy amin'ny firenena 28 avy any Afrika sy ivelan'ny kaontinanta.
Ireo mpikarakara ny AHIF dia mikasa ny hampivondrona ireo firenena avaratra sy Andrefana Andrefana, izay firenena miteny frantsay ny ankamaroany. Ity hetsika ity dia mikendry ny hampivelatra ny toekaren'izy ireo sy hanohanana ny fampiasam-bola fandraisam-bahiny amin'ny alàlan'ny tambajotran'orinasa eo ambany fiahian'ny AHIF.
“Ny fisafidianana an'i Cote d'Ivoire hampiantrano ny FIHA dia porofo fa mendrika ny laharam-pahamehana ho firenena ny [firenena] toerana fahatelo manandanja indrindra eto Afrika amin'ny fizahan-tany fizahan-tany. Izy io koa dia mampiseho ny fatokisan'ny mpampiasa vola ny tanjontsika hampisondrotra ny indostrian'ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny, "hoy i Siandou Fofana, minisitry ny fizahan-tany, Côte D'Ivoire.
“Fotoana iray hanehoan'ity sehatr'asa ity ny mety ho azy, ny tetikasany ary ny fananany fizahantany. Ny paikadin'ny fizahan-tany 'Sublime Côte d'Ivoire' dia mikendry ny hampandroso ny fizahantany ho andry fahatelo amin'ny harinkarem-pirenentsika. Manantena ny fandraisana ireo mpilalao indostrialy manana ny lazany indrindra izahay amin'ny hetsika ho avy eto Abidjan izay mavitrika, "hoy ny Minisitra.
Fitomboana any Abidjan
Abidjan dia eo afovoan'ireo tanàna afrikanina mahaliana amin'ny fampandrosoana hotely. Ny famatsiana trano fandraisam-bahiny amin'ny morontsiraka Ivory amin'izao fotoana izao dia mijanona ho voafetra, na eo aza ny fitomboana lehibe taorian'ny faran'ny krizy politika.
Ny tanànan'i Abidjan dia manangana indray ny tenany ho foibe ara-barotra, ampian'ny seranan-tsambo faharoa lehibe indrindra atsy Afrika, seranam-piaramanidina mitombo misy fifandraisana mivantana amin'i Etazonia ary fotodrafitrasa tsara kalitao mandritra ny fivoriana, kaonferansa ary fampiratiana.
Mampifandray ireo mpitarika ny orinasa avy amin'ny tsena iraisam-pirenena sy eo an-toerana ny AHIF, mampiditra ny fampiasam-bola amin'ny tetikasa fizahan-tany, fotodrafitrasa, fialamboly ary fampandrosoana hotely manerana ny faritra.
Ny hetsika dia mampifandray ireo mpandray anjara lehibe iraisampirenena sy isam-paritra ary koa mpampiasa vola tsy miankina sy andrim-panjakana amin'ny mpandraharaha sy mpandraharaha hotely izay mampiroborobo ny indostrian'ny hotely manerana ny kaontinanta.
Ny Air Canada dia manohy ny fanavaozana ny fiaramanidina amin'ny Airbus A220-300 voalohany